IChiefs igaqele uJali - Umbiko | News24
Johannesburg - IKaizer Chiefs izama ukubheka ukuthi ingamthola yini umdlali we-KV Oostende u-Andile Jali, njengoba lo mdlali owayegijima kwi-Orlando Pirates ekuthola kunzima ukuthola ijezi eBelgium.
Lo mdlali oneminyaka engu-26 ubudala wayelithola cishe njalo ijezi kwi-Oostende ngesizini ka-2015/16, kodwa ngeka-2016/17 usadlale imidlalo eyisikhombisa kuphela yeligi futhi akungabazeki ukuthi lokhu kuzomenza acasuke ngokuhamba kwesikhathi.
UJali usasalelwe unyaka owodwa kanye nengxenye yawo kwinkontileka yakhe naleli qembu laseBelgium – kanti i-Oostende mancane amathuba okuba imdedele ngemali encane njengoba lo mdlalo engasasebenzisani futhi noMike Makaab, owasiza u-anele Ngcongca ashiye iRacing genk ajoyine iMamelodi Sundowns.
OLUNYE UDABA: I-SAFA yenqabe ukunxephezela uMashaba ngo-R4.1m
Okwamanje, njengoba uJali efuna ngakho konke ukudlala, kusazobonakala ukuthi angathanda yini ukubuyela ku-PSL, njengoba kuke kwakhulunywa ngaye eNaturena.
ISoccer Laduma ibika ukuthi iChiefs ifuna lo mdlali weBafana Bafana.